Ubani nje nempela owayeke wacabanga ukuthi amazambane ezivamile, okuyinto omunye izivakashi njalo kunazo etafuleni zonke Russian kunezinzuzo ezinkulu zempilo. Ngayinye 100 g amazambane cishe 20 g isitashi, 1.2 g nosawoti ahlukahlukene amaminerali, 2 g amaprotheni. I ewusizo vitamin C amazambane incane, kodwa ngoba thina sidle, futhi vitamin C uthole ngokwanele. 200g amazambane ezintsha, iphekwé izikhumba zazo, ezanele ukwenza i umthamo sika-vitamin C, kodwa kufanele wazi ukuthi sikhuluma imifino abasha, ngokuhamba kwesikhathi, inani Vitamin kuwo incipha. Plus amazambane Kuyaphawuleka ukuthi kungaba ukupheka lenqwaba izitsha, ezinye zazo zichazwe kulesi sihloko.
Amazambane kuhhavini nge yengulube
Ikhilogremu yengulube kudingeka usike bese beat off ke wagqoka bhaka ukunambitheka prisolit kanye pepper. Top nge 2 u-anyanisi, izindandatho lisikiwe. Isigamu ikhilogremu amazambane nokuhlanza tincetu Imi, ukusakaza phezu anyanisi ufafaze pepper kanye nosawoti. Isendlalelo zokugcina - kuyinto 200 ushizi osugugile kanye imayonnaise. isikhathi Ukupheka - imizuzu 40.
Amazambane nge inyama kuhhavini
Leresiphi silula. Uzodinga isigamu kilogram of amazambane kanye yenkomo ingulube-nengulube. Amazambane abilisiwe "umfaniswano" sasicwengwa bese uthathe 2 hlangana neengcezu. Ngesigamu ngamunye ushona zizosengwa ukwenza ukhezo ukugxusha kanye halves engezansi bit anqunywe (ukuze ukwazi ukuletha). Nengulube gazinga nge izaqathe (2 izicucu, sibe yimichilo) nokukodwa isibani fake sikhuntile. Ungakhohlwa engeza usawoti kanye emnyama.
Ingxenye amazambane ufake iconsi ibhotela ke ukugcwalisa nge inyama nengulube, uthele washaywa neqanda ushizi ukuwa elele bakhathale. ukubeka kahle bhaka ubhake kuze kuphele isigamu sehora.
Amazambane kuhhavini utamatisi
8 uhlanze amazambane bese uthathe tincetu, usawoti, ufafaze dill oqoshiwe futhi ugcwalise 3 wezipuni iyiphi amafutha yemifino, pepper engeza, uma uthanda. Zonke uhlanganise kahle. 3 utamatisi futhi usike izindandatho.
pan abajonqile noma baking smear ngamafutha, ukubeka 1/2 amazambane, utamatisi no phezu kwesigamu amazambane yesibili. Mboza nge ucwecwe ubhake imayelana 30 imiz., Bese ukususa ucwecwe, futhi amazambane omunye 30 imiz. gazinga.
Amazambane kuhhavini, wabhaka emkhonweni
Amazambane kuphekwe ngale ndlela kuvela esihlwabusayo kakhulu, futhi upheke kuvele. 12 amazambane kudingeka ikhasi nosawoti. 8 ingulube izimbambo futhi kudingeka usawoti, ukusakaza nge imayonnaise, ufafaze pepper bese efakwa "emikhonweni" ngoba kuhhavini. Emhlabeni isidingo ukubeka inyama amazambane, inkathi 2 Chestnokov namazinyo nepepper, anyanisi oqotshiwe kanye parsley. "I-sleeve se" kuyadingeka ukuze uhlanganise ubhake ihora elilodwa.
amazambane athosiwe kuhhavini
Abathandi fries French kungenzeka ukulungiselela ngokwakho kuhhavini. Nokho, qaphela ukuthi kuphekwe ngale ndlela fries French ngeke njengoba okunamafutha kanye crispy njengoba ethosiwe emafutheni.
Amazambane bahlanza, sinqume zibe emapheshana futhi imizuzu engu-30. ofakwe amanzi anosawoti (4 wezipuni usawoti okudingekayo ukuze ilitha isigamu amanzi). Wesula ithawula wakhe futhi ushiye imizuzu 10 zihambisana ukuvimbela umswakama amuncwa. Ngezinye 4 wezipuni zamafutha yemifino engeza spice ukuba amazambane, bese uthele amazambane inhlanganisela. Sabalalisa ke bhaka kwelinye ungqimba isidingo bese efakwa kuhhavini kakhulu eshubile. Bhaka kuze ithenda.
Amazambane kuhhavini nge yenkomo
flavorful kakhulu futhi okumnandi uphendulela amazambane wabhaka kuhhavini ne yenkomo. Of izinto uzodinga amabhodwe noma sauté pan.
Half a kilogram of isidingo fresh yenkomo Imi ku cubes ezincane (3x3 cm), khona-ke ufafaze usawoti kanye pepper. Three wezipuni bhotela, indawo epanini, lapho lishise, Fry inyama kuso (hhayi kuze ithenda, imizuzu engu-10 kwanele). Khona-ke 600 g amazambane kuhlanzekile, izaqathe kanye 2 2 anyanisi. Amazambane uthathe cubes, onion - izindandatho uhhafu kanye izaqathe kungenziwa wagcoba. Ngaphezu kwalokho, esitsheni, ungakwazi ukwengeza imifino efana marrows, ukholifulawa noma ubhontshisi oluhlaza.
Beka inyama nemifino epanini noma izimbiza. Uma nithanda ukudla khuluphele ezansi ufake amafutha kancane. Pour konke amanzi noma umhluzi, engeza ezinye uphizi ka emnyama lavrushku. Esitsheni uphawu ukuphela 1.5 amahora. Indishi ungakwazi ukwengeza utamatisi. Uma unquma ukwenza lokhu, uwathele ngokushesha, kodwa uma amazambane uzolunga.
Ithanga abhakwe ukhilimu ushizi - isidlo esihlwabusayo futhi unempilo!
Kungani inja ebomvu abamhlophe samehlo? Yini angayenza kulesi simo?